Myitter, Author at Myitter - Page 284 of 289
Articles by Myitter
July 18, 2019 Myitter 0
၈ တန်းကျောင်းသားအချင်းချင်းဓားထိုးမှုဖြစ်ပွား ၁၈.၇.၁၉ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွှေပြည်မြို့ အ.ထ. က(၄)ကျောင်း၈တန်း(b)တွင်တက်ရောက်နေသောကျောင်းသားဖြစ်သောမောင်ခန့်စည်သူအသက်(၁၅)နှစ်သည် ၁၇.၇.၁၉ ရက်နေ့မနက် ၁၀ နာရီခန့်တွင်ကျောင်းတက်နေစဉ်ကျောင်းအိမ်သာသွားပြီး…ီးအပြန်၈တန်း(c)အခန်းအားလှည့်ကြည့်ခဲ့ပြီးမိမိအတန်း(b)သို့ပြန်လာပြီးထိုင်နေစဉ်(c)အခန်းမှမောင်မြင့်မြတ်သူ(၁၆)နှစ်မှလိုက်လာပြီးမင်းဘာလို့ကြည့်တာလဲမေးရာမောင်ခန့်စည်သူမှကြည့်တော့ဘာဖြစ်လဲပြန်ပြောသဖြင့်မောင်မြင့်မြတ်သူမှပါးတစ်ချက်ရိုက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၈.၇.၁၉ မနက်(၁၁)ခွဲအချိန်ခန့်တွင်မောင်ခန့်စည်သူသည်ကျောင်းမတက်ပဲကျောင်းအပြင်ပန်းခြံစုဗဟိုလမ်းတွင်မောင်မြင့်မြတ်သူကျောင်းဆင်းအပြန်စောင့်နေပြီးအသင့်ယူဆောင်လာသောအရိုးအသွား(၁၀)လက်မခန့်ဓားဖြင့်သုံးချက်ထိုးခဲရာမောင်မြင့်မြတ်သူမြေပေါ်လဲကျသွားပြီးထွက်ပြေးမယ်အလုပ်အနားရှိလူကြီးများမှဖမ်းစီးပြီးသက်ဆိုင်ရာသို့အပ်လိုက်ပါသည်။ မောင်မြင့်မြတ်သူအားအင်းစိန်ဆေးရုံကြီးသို့အနားရှိလူကြီးများမှပို့ပေးခဲ့ပြီးမောင်ခန့်စည်သူအားရွှေပြည်သာမြို့ မြို့မရဲစခန်းမှပုဒ်မ(၃၂၆)ဖြင့်ကနဦးအမှုဖွင့်ဖမ်းစီးထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ကိုရဲ(ရွှေပြည်သာ) unicode version ၈ တနျးကြောငျးသားအခငျြးခငျြးဓားထိုးမှုဖွဈပှား ၁၈.၇.၁၉ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး ရှပွေညျမွို့ အ.ထ. က(၄)ကြောငျး၈တနျး(b)တှငျတကျရောကျနသေောကြောငျးသားဖွဈသောမောငျခနျ့စညျသူအသကျ(၁၅)နှဈသညျ ၁၇.၇.၁၉ […]
“ ခွင့်လွှတ်ပါ ဗိုလ်ချုပ် ပြန်မလာနိုင်တော့ဘူး…… ”
“ ခွင့်လွှတ်ပါ ဗိုလ်ချုပ် ပြန်မလာနိုင်တော့ဘူး။ ” ဒေါ်ခင်ကြည် ချစ်ခွင့်မပန်ပဲ လက်ထပ်ခွင့် တန်းတောင်းလို့ဗိုလ်ချုပ်ကို စိတ်မဆိုးလိုက်ပါ နဲ့သူ့မှာ လွတ်လပ်ရေးအတွက် ဖိနပ်တောင် ဘယ်နဲ့ ညာ မှားစီးခဲ့တာ။ ဘန်ကောက်ရေခင်ဗျားမြေမှာ မြန်မာပြည်ကြီး လွတ်လပ်ရေး အတွက်လက်မောင်းဖောက် သွေးသောက် သစ္စာဆိုသွားတဲ့အောင်ဆန်းက ရင်ဘတ် မှာ ကျည် […]
စာသင်ခန်းကို ကာမခန်းအဖြစ် ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းဆရာကြောင့် တစ်သက်လုံး ခေါင်းမဖော်ဝံ့တော့တဲ့ ကျောင်းသူလေး(၃) ဦး
ခြစ်ခြစ်တောက်ပူနေသည့် နေရောင်အောက် တောခုတ်ဓားတစ်ချောင်းဖြင့် ကြံကို တစ်ပင်ချင်းခုတ်ရင်း မမိုးအေးက သူ၏အနာဂတ်အိပ်မက်ကို ပြောပြသည်….. ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်သည်ဆိုသော်လည်း အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် မမိုးအေးတယောက် ကျောင်းတော့မတက်ချင်ခဲ့။ အတိအကျဆိုလျှင်တော့ ဆရာလေး၏ အချိန်ပိုသင်တန်းကျောင်းကို မတက်ချင်ဟုဆိုလျှင် ပိုမှန်သည်…… တရွာလုံးက “ဆရာလေး” ဟု ခေါ်ကြပြီး လေးလေးစားစား ဆက်ဆံကြသည့် […]
အလုပ်အကိုင် အထိအခိုက်ဖြစ်အောင် နှောင့်ယှက်သူ ကိုယ်နဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်နေသူများကို ရေဖြင့် မေတ္တာပို့နည်း
ရေမေတ္တာပို့နည်း လက်တွေ့ နည်းကောင်းတစ်ခုပေးမည်။ အကယ်၍ စိတ်အာရုံညှတ်ပြီး မေတ္တာပို့ပေးနေရုံ သက်သက်ဖြင့် ထိုသူ၏ ရန်မူနေခြင်းကိစ္စ အမြန် ပြေအေးသွားမည် မထင်ရလြှင် ရေမေတ္တာပို့ယူပါ၊ နည်းမွာ မိမိအလိုရွိသူကို ရည်မွတ်၍ သန့်ရွင်းသော ရေဖန်ခွက်တစ်ခုတွင် ကြောက်ခဲကေလး တစ်ခုဖြစ်စေ၊ တုတ်ျေခာင်းကေလး တစ်ခုဖြစ်စေစိမ်ထားပါ သူ၏စိတ်နွလုံး ရေကဲ့သို့ အေးချမ်းသွားပါစေ […]
ကြည့်ရှု့သူ3သန်းနီးပါးရှိတဲ့ ဖြူဖြူထွေးရဲ့ သက်ငယ်မုဒိန်းပညာပေး ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပါ….
ကြည့်ရှု့သူ (၃)သန်းနီးပါးရှိတဲ့ ဖြူဖြူထွေးရဲ့ သက်ငယ်မုဒိန်းပညာပေး ဗီဒီယို ကျောင်းကပွဲတစ်ခုရဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲ ရုပ်သံတစ်ခုကြောင့် နာမည်ကြီးသွားခဲ့ပြီး အနုပညာလောကထဲကို ရောက်လာတဲ့ ဖြူဖြူထွေးဟာ ချစ်ဖို့ကောင်းသလို မိဘကျေးဇူးသိတတ်သူတစ်ယောက်ပါ….. အနုပညာလောကမှာ ကြော်ငြာတွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ လက်ခံရိုက်ကူးလျက်ရှိပြီး ပရိသတ်တစ်ခဲနက်အားပေးထောက်ခံမှု ရထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်…. ဖြူဖြူထွေးဟာ သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်….နှာမှာ သက်ငယ်မုဒိန်းနှင့် ဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့ […]
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ ဒီသတင်းကို ကြားပါတယ်။ မယုံရဲလို့ FB ပေါ်လည်း မရေးခဲ့ပါဘူး။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ ဒီသတင်းကို ကြားပါတယ်။ မယုံရဲလို့ FB ပေါ်လည်း မရေးခဲ့ပါဘူး။ စိတ်ထဲမှာတော့ တကယ်ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းနေမိတာ။အခုတော့ သေချာသွားပြီဆိုတော့ ရေးပြီလေ။ ဒီလိုပါ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာကမ္ဘာကျော်ဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Nicolas cage နီကိုလပ်ကေ့ခ်ျ ရုပ်ရှင် လာရိုက်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းပါ။ လာရိုက်မယ့် ဇာတ်ကား နာမည်က […]
( 18.7.2019 မှ 24.7.2019 အထိ ) ၇ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာ ဟာစာတမ်း
တနင်္ဂနွေ ဒီကာလအတွင်းမိမိအတွက် အရာရာတိုင်းကို လက်လျောညီထွေနေထိုင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ သူများတွေက မိမိကိုတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေ၊ မိမိကိုမခံချင်အောင်ပြောတာမျိုးတွေကြုံနေရတတ်ပါတယ်။ သည်းခံစိတ်မွေးပါ။ အထက်လူကြီးရဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးတွေခံရတတ်ပါတယ်။ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အချိန်ကုန်မနေပါနဲ့။ တကယ်လို အပ်မှမိတ်ဆွေတွေနဲ့ဆုံတွေ့ပါ။ မိတ်ဆွေကောင်းထက် မိမိကိုဖျက်ဆီးမဲ့မိတ်ဆွေတုတွေပေါများနေတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားများလက်ရှိလည်ပတ်နေတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ပါ။ ထပ်ချဲ့တာ၊အပြောင်းအလဲလုပ်တာမျိုးတွေကို တော့ဒီကာလမှာရှောင်စေချင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဒူးကိုယ်ချွန်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေရတတ်ပါတယ်။ သူများကိုမှီခိုလိုစိတ် ကိုတော့ တတ်နိုင်သလောက်လျှော့လိုက်ပါ။ ကျန်းမာရေးကတော့ ဒီကာလဟာ မဖြစ်ရင်လဲဘယ်လိုနေနေ၊ဘယ် လိုစားစားဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ […]
မော်လမြိုင်မြို့က ရဲတပ်ဖွဲ့အကြောင်း တစေ့တစောင်း
July 17, 2019 Myitter 0
ဝါဆိုပန်းခူးပွဲတော်တွင် မလိုလားအပ်သော မှုခင်းများ မဖြစ်ပွားစေရေးအတွက် သူတို့ ဒီလိုလုပ်ပေးခဲ့ကြတယ် မော်လမြိုင် ဇူလိုင် ၁၇ စေတနာပါတဲ့ပုံတွေ တွေ့ရပါတယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဝါဆိုပန်းခူးရောက် တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေကြပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ် တော့ သာမာန်နှစ်တွေနဲ့ မတူတဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ ဆောင်ရွက်ပုံတွေ မြင်ရ ပါတယ်။ […]
ဇွဲနဲ့သတ္တိကို ချီးကျူးလေးစားပါတယ် ကိုဇော်ထူးရေ…….မြန်မာအချင်းချင်း…. ပင်လယ်ပြင်ထဲ ….. မညှာမတာကန်ချ… သတ်ဖြတ် ခံရသော သဘောင်္သားတစ်ဦး(ရုပ်သံ)
မြန်မာအချင်းချင်း မညှာမတာ ပင်လယ်ပြင်ထဲ ကန်ချ သတ်ဖြတ် ခံရသော သဘောင်္သားတစ်ဦး(ရုပ်သံ) မြန်မာအချင်းချင်း မညှာမတာ ပင်လယ်ပြင်ထဲ ကန်ချ သတ်ဖြတ် ခံရသော သဘောင်္သားတစ်ဦးကို ပင်လယ်ပြင်ထဲ ၄ နာရီကျော် ကြာကူးခတ်နေရာမှ သဘောင်္တစ်စီးမှ အသက်ရှင်လျှက် ပြန်လည် ဆယ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်.. ကန်ချသတ်ဖြတ်ခံရသူ အမည် ဇော်ထူးလို့သိရပါတယ်..လက်အုပ်ကလေးချီပြီး […]
မန္တလေး ဇူလိုင် 16ဖခင်ဖြစ်သူက ၁၂ နှစ်အရွယ် စွံ့အနားမကြားသူအား အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား
မန္တလေးမြို့ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် သင်ပန်းကုန်းရပ်ကွက် တွင် အသက် (၁၂) နှစ်အရွယ် စွံအနားမကြားသူအား ဖခင်ဖြစ်သူက သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့မရဲစခန်း က သိရသည်….. ဖြစ်စဉ်မှာ ကျူးလွန်ခံရသူ၏ မိခင် နှင့် ကျူးလွန်သူ မျိုးမြင့်အောင် (၄၂) နှစ်တို့သည် လွန်ခဲ့သည့် (၁၄) နှစ်က အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ပြီး […]
« 1 … 283 284 285 … 289 »